Rugby – Top 14 : Ady farany ho an’Analamanga ny lalaon’Ikopa sy 3FB
Ny 3FB sy ny US Ikopa no hiatrika ny lalao famaranana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga eo amin’ny rugby diviziona voalohany na ny « Top 14 ».
Tamin’ny alalan’ny moka fohy, 27 no ho 26, no nandavoan’ny US Ikopa ny Iarivo rugy club omaly, teny Mahamasina nandritra ny lalao manasa-dalana. Niondrika teo anatrehan’ny ekipan’ny minisiteran’ny Fahasalamana (3FB) tamin’ny alalan’ny isa 33 no ho 27 kosa no ny miaramila tamin’ny manasa-dalana faharoa.
Nanatombo teo amin’ny fahaizana mifehy ny lalao ny 3FB teo amin’ity lalao ity ary hainy ny nanararaotra ny fihenan’ny tanjak’ireto miaramila ireto. Hotontosaina amin’ny 6 novambra ho avy izao ity lalao famaranana, izay efa niseho teto Analamanga ity.